Ngwunye nhicha nke China, Separator ike ndọda, onye nrụpụta igwe na onye na-ebubata ihe
Mkpụrụ Mpempe & Grader
Mkpụrụ Dị Mma
Ike ndọpụ iche
Ngwa igwe Mbibi
Tdị Belt Type
Ngwunye Ọgwụ Mkpụrụ
Sisikiri Akara Eke
Ebumnuche & Ebufe
Mkpụrụ nhicha & Nhazi igwe
Nhazi Usoro Mkpụrụ
Nhicha / Nri nhicha / Osisi
Labour Mkpụrụ Labou
Huller na ndị ọzọ
SHIJIAZHUANG SYNMEC INTERNATIONAL TRADING LIMITED [Hebei,China] Ụdị ahịa:Manufacturer , Trade Company Ahịa isi: Worldwide Onye na-emepụta ihe:91% - 100% N'ezie:ISO9001, CE, Test Report Nkọwa:Igwe nhicha nhicha emeputa / soplaya, inye Ike ndọpụ iche,Ngwa igwe Mbibi, wdg.
Ike ndọpụ iche 
Igwe nke ikuku
Igwe ikuku ikuku Typedị Gravity Separator
Ngwa igwe Mbibi 
Destdị Mgbapu ikuku
Sudị Mkpofu ikuku
Separator magnetik 
5XCX Series Magnetik Separator
Single Roller Magnetik Separator
Obere Onye Igwe Ọdụdọ
Sisikiri Akara Eke 
Sisikti Akpadoro DCS-B
Sisikti Akpadoro DCS-S
Akpaaka Granule akpaaka
Ngwa akpa eji eme ihe
Ebumnuche & Ebufe 
Elekere DTY Bucket
Ọhụrụ ebu Ọhụụ
Typedị Bọket Ọkpụkpụ
Nhicha / Nri nhicha / Osisi 
Osisi Mkpụrụ Mkpụrụ
Osisi Na Bean nhicha osisi
Osisi na-ahazi Mkpụrụ
Labour Mkpụrụ Labou 
Lab Mkpụrụ Cleaner & Grader
Ihe nyocha Lab
Machinelọ nyocha Lab
Huller na ndị ọzọ 
Rice Huller na Polisher
SYNMEC, ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ofesi nwekwara ọkachamara n'ichepụta ọka na igwe mkpụrụ osisi. Aha ụlọ ọrụ anyị bụ Hebei Ruixue Grain Selecting Machines CO.Ltd, SYNMEC dị ka akara ụwa of 'Ruixue Grain Selecting Macht LTD', bụkwa ụlọ ọrụ nwere onwe ha 'SYNMEC international trading Ltd.' Yabụ anyị nwere ike ịnye igwe ọrụ ọkachamara na ọrụ azụmaahịa mba ụwa. Anyị bụ otu onye isi na onye nrụpụta ọrụ na China nwere afọ 13. Ruo ugbu a, SYNMEC rụzuru ihe karịrị ndị ahịa 100 mba, yabụ anyị ghọtara iwu azụmaahịa mba ụwa maka mba niile na-elekọta na anyị nwere ike ịnye akwụkwọ mbufe kacha mma maka iwepụ ngwa ahịa ndị ahịa, na-eduga n'ibelata ihe egwu dị na inweta ndị ahịa ikpeazụ. Companylọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ dị elu, nke pụrụ iche na nyocha na nrụpụta nke mkpụrụ osisi, igwe ọrụ ugbo, igwe ugbo sitere na ngwa ọrụ na ngwa nri. Companylọ ọrụ anyị nwere ikike ego dị ike, akụrụngwa dị elu yana ebe a na-arụ ọrụ nyocha nke ọma. Anyị na-agbasi mbọ ike iji webata teknụzụ dị elu na ahụmịhe nchịkwa si n'ụlọ na mba ofesi. Anyị ejiri obi anyị niile na-eme nyocha na ịzụlite ngwaahịa teknụzụ dị ukwuu ma na-enye onyinye maka mmepe nke mkpụrụ, ngwaahịa ọrụ ugbo, nri na igwe na-edozi nri. Anyị nwere ọtụtụ edemede na ụdị nke igwe ọrụ ugbo. Site na teknụzụ dị elu, arụmọrụ dị mma, nke kwụsiri ike, atụmatụ ezi uche na ọrụ na-echebara echiche, ngwaahịa anyị kacha elu n'ahịa ụlọ. Ugbu a, anyị nwere ike ịnye ngwa nhazi nke 25 ụdị na ihe karịrị 100 ụdị, dịka ịzọcha ọka, ịhọrọ, nhicha nhicha, nhicha, mbupu okwute, iwepụ ọla, ịwepụta, grading, ikewapụ ikike ndọda, mkpụrụ mkpụrụ, akpa aka akpa na igwe eji eme ihe. Etinyego ọtụtụ ngwa ahịa maka akwụkwọ ikike mba. Kwado mmụọ nke ụlọ ọrụ nke "ihe ọhụụ, were ihe ịma aka ma gafere" na njikwa njikwa nke "ogo ọkwa mbụ, ọrụ dị elu na aha kachasị elu", anyị abụrụla ndị isi na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-ejikọta "nyocha sayensị, ụlọ ọrụ na azụmahịa". Companylọ ọrụ anyị nwere ngwaahịa dị elu yana ọrụ azụmaahịa zuru oke, anyị na-etinyekwa aka na azụmaahịa mba na mbupụ. Companylọ ọrụ anyị aghọọla onye na - emepụta mkpụrụ, ngwaahịa ọrụ ugbo, nri na igwe nri na China. Anyị dị njikere isoro ndị ahịa na-arụ ọrụ, anyị ga-ewetakwa ngwaahịa dị elu (ogo dị elu, ịrụ ọrụ nke ukwuu na ọtụtụ ebumnuche), ọnụahịa dị ala na ọrụ zuru oke nye ndị ahịa anyị.
Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Milie Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Millet De Stoner
Paddy Rice Mkpụrụ Mkpụrụ Mgbapu Ngwaọrụ Mkpụrụ destoner na -eji wepụ arọ mba ọzọ adịghị ọcha dị ka nkume, dara na iko iberibe wdg na ụkpụrụ nke ibu dị iche. 5XQS mkpụrụ mkpofu mkpụrụ bụ iwepụ nkume . Onye mbibi nwere ike ịhazi ụdị mkpụrụ na agwa niile, ma nwee nsonaazụ mbibi dị mma maka agwa, mkpụrụ sunflower na...
Millet Mkpụrụ Soybean Mkpụrụ Mkpụrụ Ọka De De Stoner
Paddy Rice Mkpụrụ Mkpụrụ Mgbapu Ngwaọrụ
ọka kọmputa na-erikpu ihe dị ka 50 n'arọ
Mkpokoro mkpụrụ osisi nhicha nhicha ọcha
Ngwunye ụlọ nhicha
Mkpesa mkpụrụ gburugburu dị mma maka gburugburu
Ngwa nhicha Mkpụrụ / Ezi Mkpụrụ
Mpempe akwụkwọ kọfị kọfị kọfị
Nhazi ọka ọka ọka
Coriander sorghum na-akụda destoner
usoro ịkụ ọka na-atụle usoro usoro mbukota ihe
Ngwa igwe nhicha Quinoa Australia ama ama
Adreesị:15th Guangan Street, Shijiazhuang, Hebei
Osisi nhicha Mkpụrụ
Mkpụrụ Mkpụrụ Ike ndọpụ iche Ngwa igwe Mbibi Ezigbo nhicha Ngwunye Ọgwụ Mkpụrụ Osisi nhicha Mkpụrụ
Copyright © 2021 SHIJIAZHUANG SYNMEC INTERNATIONAL TRADING LIMITED Ikike niile echekwala. Kwadoro site na
Igwe nhicha nhicha emeputa / soplaya
, inye Ike ndọpụ iche,Ngwa igwe Mbibi, wdg.